🥇 ▷ Ma jeceshahay inaad Oppo Find X ku caddaato? Halkan waxaa ah dhowr sawir oo fikrad kaa qaadanaya (sawir) ✅
Ma jeceshahay inaad Oppo Find X ku caddaato? Halkan waxaa ah dhowr sawir oo fikrad kaa qaadanaya (sawir)
Oppo Find X xaqiiqdi waa mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ay leedahay yaab inta badan waqtiyadii ugu dambeeyay, gaar ahaan isaga naqshad cusub iyo Beddel kale oo ansax ah kaas oo metelaya ixtiraamka feejignaan. Maanta waxaan ku soo noqonay inaan kaaga sheegno waxa ku saabsan maxaa yeelay cadeymo ayaa ka soo muuqday shabaqa taas oo soo jeedinaysa mala awaal midab cad oo cusub qalab, marka lagu daro Bordeaux Red waa Glacier Blue lagu soo bandhigay bandhiga ugu horreeya.
Caddaynta kor lagu soo xusay waxay ka kooban tahay sawirada lagu muujiyey hoose: waxay muujinayaan a Ka hel X midab cad, gadaal iyo gadaalba. Haddii la xaqiijiyo, Oppo wuxuu raaci lahaa wadadii uu u safray OnePlus, kaas oo qaatay midabka cad ee ugu sareeya ee tirada. Sida iska cad, waxay noqon kartaa, abuuritaan qaar ka mid ah taageerayaasha shaqsiyadeed, ama si fudud been abuur ah.
AKHRISO: Oppo Find X, aragtidayada
Waqtigan xaadirka ah, ma hayno xaqiijin ama beeninno ka timid shirkadda Shiinaha, vi waan la socon doonnaa arrinta. Dhanka kale, nala soo socodsii waxaad u maleyneyso midab cad oo khiyaali u ah Oppo Find X.
Dhanka: GSM Arena